लाभांश पारित गर्न मेगा बैंकले मंसिर २८ मा बोलायो एजीएम, बुक क्लोज कहिले ? « Nepal Bahas
लाभांश पारित गर्न मेगा बैंकले मंसिर २८ मा बोलायो एजीएम, बुक क्लोज कहिले ?
प्रकाशित मिति : ७ मंसिर २०७८, मंगलवार १०:१३
७ मंसिर, काठमाडौं । मेगा बैंकको ११ औं वार्षिक साधारण सभा मंसिर २८ गते हुने भएको छ । सभा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादी काठमाडौंमा बिहान ११.१५ बजेदेखि सभा सुरु हुनेछ ।
बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्तालाई १०५ बोनस सेयर र कर प्रयोजन सहित गरेर २.०७ नगद नगद लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पेश गर्दैछ ।
बोनस वितरणपछि चुक्ता पुँजी वृद्धि हुने भएकोले प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संसोधन गर्ने एजेन्डा पनि छ । यसैगरी, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग गाभ्ने–गाभिने सम्बन्धि सम्पूर्ण कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने प्रस्ताव पनि रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वासलात, नाफा–नोक्सान र नगद प्रवाहमाथि छलफल हुनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने लगायतका एजेन्डा पनि राखिएको छ । सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बैंकले मंसिर १४ गते बुक क्लोज गर्दैछ । मंसिर १३ गतेसम्म कायम सेयरधनीले लाभांश सुरक्षित गर्न सक्नेछन् ।